Midowga Afrika ayaa Taliye cusub u soo magacaabay ciidamada AMISOM ee howlgalka nabad… – Hagaag.com
Midowga Afrika ayaa Taliye cusub u soo magacaabay ciidamada AMISOM ee howlgalka nabad…
Posted on 3 Agoosto 2020 by Admin in National // 0 Comments
Midowga Afrika ayaa taliye cusub usoo magacaabay ciidamada AMISOM ee howlgalka nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya, kadib markii uu mudo xileedkiisa dhamaaday taliyihii hore ee ciidankaasi.
Jeneral Diomede Ndegeya oo u dhashay dalka Burundi ayaa loo magacaabay taliyaha cusub ee ciidamada AMISOM, waxaana taliyahan uu soo gaaray laguna soo dhaweeyay magaalada Muqdisho oo kuyaalo taliska ugu weyn AMISOM.
Taliyahan cusub ee loo magacaabay ciidamada AMISOM ayaa badalay taliyihii hore ee ciidankaasi General Tigabu Yilma oo u dhashay dalka Itoobiya, waxaana xilka taliyaha AMISOM tahay wareegto marba dowladaha ciidamada ka joogaan Soomaaliya qabtaan.
Jeneral Diomede Ndegeya , ayaa markii uu soo gaaray magaalada Muqdisho sheegay in uu u yimid sidii uu u caawin lahaa Soomaaliya, waxa uuna xusay in dhoor mar hore Soomaaliya yimid kana shaqeeyay.
Taliyahan cusub ee ciidamada AMISOM ayaa kahor inta aan xilkan loo magacaabin waxa uu lataliye sare u ahaa Wasaarada Gaashaandhiga dalkaasi, waana sargaal wax badan kala socda xaalada Soomaaliya horeyna uga soo shaqeeyay.